Dalalka Carabta oo dhaqaale cusub u ballan qaaday Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mogadishu, September 12, 2014- Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga Soomaaliya, Mahad Mohamed Salad oo maanta caasimadda Muqdisho dib ugu soo laabtay, kadib markii uu ka qeybgalay shirkii wasiirada arrimaha debadda Carabta.
Wasiir ku xigeenka ayaa ka warbixiyay shirka Wasiiradda Arrimaha Dibadda Carbeed kulankiisii 142-aad oo ka dhacay Magaalada Qaahira, kaasoo Wasiir kuxigeenka uu ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay horumarka siyaasadeed iyo ammaan ee dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku dhaqaaqday, qorshaha hiigsiga cusub, doorashooyinka la filayo in dalka ay ka dhacaan sanadka 2016, la dagaalanka argagaxisada iyo baahida dowladda u qabto taageero maaliyadeed.
Mahad Mohamed Salad oo shir jaraa’id ku qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Xubnaha ka ah Ururka Jaamacadda Carabta ay balan-qaadeen inay ka taageeri doonaan dowladda Soomaaliya dhanka maaliyadda, si gaar ah kabidda miizaaniyad sanadeedka dowladda u degsan, waxa ayna bogaadiyeen howlgalada ammaanka lagu sugayo ee ka soconaya dalka.
Wasiir kuxigeenka waxa uu xusay in wadamada Carabta ay garwaaqsadeen in dowladda Soomaaliya ay dhabarka ka jabisay argagaxisada muddo sideed sano ah oo xiriir ah oo ay dagaal adag kula jirtay, iyadoo aan ka helin beesha caalamka kaalma dhaqaale iyo mid milatari oo dhameystiran.
Wasiir kuxigeenka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga Mahad Mohamed Salad ayaa sheegay in uu kulamo gaar gaar ah la kala yeeshay qaar ka mid ah Wasriirada arrimaha dibadda iyo ergada kale ee lagu cazuumay ka qeybgalka shirkaasi, isagoo caddeeyey in booqashadii hore loo qorsheeyay ee uu dalka ku imaan lahaa Xoghayaha guud ee Ururka Jaamacadda Carabta Dr. Nabil Elaraby ay dib u dhacday.
Wasiir kuxigeenka waxa uu sheegay in bisha October ay dalka booqasho ku imaan doonaan Wasiiro iyo mas’uuliyiin sar sare oo carbeed, waxa ayna qeyb ka noqoneysaa dadaalada Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ay ku xoojineysaa ka mira-dhalinta siyaasadeeda dibadda.
Wasiir kuxigeenka ayaa kahor inta aanu Shir jaraa’id qaban, waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay agaasimaha guud habmaamuuska qaranka Adv. Hersi Haji Olosow, Agaasimaha Machadka Daraasaadka Diblomaasiyadda iyo Tababarada Yusuf Alasow Mohamud, mas’uuliyiin sare oo Wasiiro ka ahaa Xukuumadihii KMG ahaa, qaar ka mid ah Madaxda hey’adaha dowladda iyo saraakiil kale oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga.
← Xisbiyada UCID iyo Wadani oo hanjabaad u jeediyey Axmed Siilaanyo → Europe’s Juncker Revolution